Archive Oberwesel - Xuquuqda Aadanaha & Farshaxanka Fudud ee ∴ PixelHELPER Foundation
Codsiga muwaaddiniinta si loo badbaadiyo Rugta Caafimaadka Loreley by wakiil
Post Sticky By Oliver Bienkowski On 17. January 2012
Waxyaabaha soo socdaa waa tusaalaha koowaad ee dagaalka ka dhanka ah dimoqraadiyada tooska ah iyadoo loo maro afti. Halkii ay ka eegi lahaayeen fikradaheena hawlwadeenka ah, siyaasiyiintu waxay si xawli ah uga soo horjeedaan dalabka muwaadiniinteenna ee ku aadan marinnada oo dhan, taas oo ina tusaysa inaan ku soconno wadada saxda ah. Ilaa iyo inta maxkamad maammul maammulku go'aan ka gaadhin, dalabkayaga muwaaddinnimadayadu lama aqbali karo marka loo eego qodobka municip17 ee degmada. Maanta, xitaa joornaalka rasmiga ah ayaa si khaldan loogu isticmaalaa dhisidda-niyadda. Waxaan hadda codsaneynaa wargalinta ogeysiiska.
Siyaasiyiinta doonaya inay xiraan Isbitaalka Loreley waxay ku shaqeeyaan habab sumcad dilid ah oo haddii kale loo adeegsado oo keliya dowladaha kali talisnimada ah. Iskuxirka magaalooyinka iyo dowladaha hoose waxay ubaxaan maxkamada fikradooda waxaa loo soo bandhigaa muwaadiniinta sida xukunka maxkamada maamulka. Muwaadiniinta qaar waxay ugu baaqeen tabarucaad mudaharaadyada hal abuurka muwaadiniinta hore ee “Difaaca rugaha caafimaadka ee Loreley”, shirkado shaqsiyadeed ayaa in ka badan over 10.000 ugu deeqay ururka taageera isbitaalka. Waxaan helnay € 0 oo tabarucaad ah codsigeenna ku wajahan muwaadiniintana waa la naqdiyay maxaa yeelay waxaan raacnay talooyinka Mehr Demokratie e. V. waxay ku qortay lambarka koontadayada deeqda xaashida.
Fursadda ugu dambeysa ee lagu badbaadin karo Rugta Caafimaad ee Loreley waa codsi ay muwaadiniintu ka codsanayaan mid kasta oo ka mid ah 3da magaalo ee iskaashatada ah. Qof kasta oo ku nool deegaankiisii ​​ugu horreeyay ee magaalada ay deggan tahay oo ka weyn 18 jir ayaa saxeexi kara. Fadlan dukumiintiga si balaaran ugu qaybi deegaankaaga.
Hoos u rog si aad u kala doorato Oberwesel, St. Goar & Ururka Hunsrück-Mittelrhein.
Iyada oo la socota fikradda cusub ee hawlwadeenka PixelHELPER Foundation, waxaan hogaamineynaa rugaha caafimaad ee Loreley mustaqbal aamin ah!
Codsiga muwaadiniinta ee Oberwesel
Guji masawirka si aad u soo degsato shaxda saxiixa. Tani waa in had iyo jeer loo qaybiyaa fikradda wadaha.
Codsiga Muwaadiniinta ee Magaalada Sankt Goar
Codsiga muwaadinku u leeyahay bulshada Hunsrück-Mittelrhein
Keydso rugaha caafimaad ee Loreley. Hay'adda samafalka ah ee 'PixelHELPER Foundation GmbH' waxay rabtaa inay la wareegto isbitaalka oo ay sii waddo inay u shaqeyso sidii xalka 1-da guri. Saadaasha iftiinka ee Wasaaradda Caafimaadka ee Berlin
Xaalada taagan 20.04.2020/21/15 XNUMX:XNUMX
Kombuyuutarka hadda jira ee Abriil 2020 ee CDU Oberwesel wax qalad ah ayaa la sheeganayaa, taas oo ah in rugta caafimaadku noqon lahayd macaash.
Krankenhaus GmbH St. Goar-Oberwesel, sida magacaba ka muuqata, waa GmbH oo ma ahan GmbH aan faa'iido doon ahayn. Kaliya waa laga dhaafay canshuurta qaar laakiin sadaqo ma ahan. Isku soo wada duuboo, waa in la ogaadaa in ka cafinta cashuurta ganacsiga, ay
Canshuuraha iibka iyo canshuurta hantida waxaa lasiiyaa dhammaan cosbitaalada buuxiya shuruudaha § 67 AO. Tani waa iyada oo aan loo eegin haddii isbitaalku uusan faa'iido doon ahayn. Ka dhaafitaanka canshuurta shirkadaha waxaa kaliya la siiyaa isbitaalada aan macaash doonka aheyn ee macnaheedu yahay §§ 51-68 AO. Xilligan la joogo waa GmbH ay ku jiraan dhammaan suurtagalnimada lacag lagu kala baxo. Waaxaha waa la xirey waxaana tikniyoolajiyadda isbitaallada loo weeciyey isbitaallada kale. Beddelista GmbH-faa iido ma la heli karaa. Ka caawinta dalabka muwaadiniinta si ay u sii wadaan hawlgallada aan macaash doonka ahayn ee rugaha caafimaad facebook.com/loreley-klinik oo ay weheliso shirkad masuuliyad xaddidan oo aan macaash doon ahayn, maalgelin badan ayaa la heli karaa marka loo eego qaab dhismeedka shirkadda mas'uuliyadda xadidan, macaashna mar dambe ma socon karo, laakiin waa in loo adeegsadaa ujeeddooyinka aan macaash doonka ahayn cusbitaalka cusub ee aan macaash doonka ahayn. Xaaladdayadu waxay noqon lahayd xarun caafimaad lafteeda, xarunta weyn iyo aqoon-isweydaarsiga cusub ee loogu talagalay dadka naafada ah ee ku nool xaruntii hore ee Sankt Goar. Macluumaad dheeri ah, hoos ugu dhaji boggan.
Xaalada taagan 19.04.2020/13/00 XNUMX:XNUMX
Waxaan ka bilaabeynaa seddex codsi magaalooyinka saamilayda si loo gaaro in kulanka cusub ee "saamileyda aan caadiga ahayn" uu ka codsado Marienhaus Holding GmbH inay ku wareejiso saamigaaga 55% ee isbitaalka PixelHELPER Foundation oo aan faa'iido doon ahayn GmbH, sida aad ugu yaboohday Laanqeyrta Cas.
Intaas waxaa sii dheer, isbitaalku waa in loo beddelaa shirkad aan macaash doon ahayn si loo ilaaliyo dhammaan faa'iidooyinka shirkadda mustaqbalka isla markaana aan loo qaybin saamiyada saamileyda. Si tan loo sameeyo, waa inaan ururinaa ku dhawaad ​​300 saxiix oo ka imanaya codbixiyaasha lammaanaha goobta.
PixelHELPER Foundation aan macaash doonka ahayn GmbH waxay horumarisay fikrad waxayna ku bixisaa dayactirka iyo sii wadida rugta caafimaadka ee Oberwesel. Soo-jeedinta si gaar ah diiradda u saareysa ka-mid-noqoshada ayaa lagu abuuri doonaa goobta Sankt Goar. Tan waxaa ku jira qaabab nololeed oo cusub oo loogu talagalay 8-16 qof, iyo sidoo kale aqoon isweydaarsi ku xiran dadka naafada ah.
Isbitaalka ku yaal Oberwesel sidoo kale waa inuu dib u howlgeliyaa dhammaan waaxaha takhasuska gaarka u leh sida qeybta daryeelka degdegga ah si ay ugu shaqeeyaan isbitaal buuxa.
Wadashaqayn iyo iskaashi lala yeesho Jaamacadda Marburg iyo shirkadaha tikniyoolajiyadda caafimaad ee ku dhow, aqoon isweydaarsiga naafada ayaa soo saari doona qaybo caafimaad oo alwaax ah oo la xiriira oo loo isticmaali doono dhoofinta Afrika.
Dhisidda aqoon-is-weydaarsi cusub oo loogu talagalay dadka naafada ah, oo ay ku jiraan ku-noolaashaha bilaa-la’aanta, maalgelinta ilaa 600.000 euro waa in laga dalbadaa Aktion Mensch.
Mu'asasada PixelHELPER waxay rabtaa inay muujiso si xasaasi ah sida shuruudaha bulshada gabowga loogu qancin karo qaab casri ah iyo mustaqbal ku jihaysan dalka.
Si loo hubiyo xasilloonida maaliyadeed, hay'adda 'PixelHELPER Foundation' waxay xoogga saari doontaa furitaanka aagag faa'iidooyin cusub si loo hubiyo inay sii waddo sidii isbitaal aan faa'iido doon ahayn Waxaan sidoo kale fileynaa in maaliyaddu ay ka hesho sanduuqa qaab-dhismeedka isbitaalka si ay usii waddo hawlgalka rugta caafimaad iyo fidin.
Halkan, Pixelhelper Foundation, iyada oo loo sii marayo taageerayaasheeda, waxay ku dhici kartaa shabakad caan ah oo ku saabsan siyaasada caafimaadka Jarmalka.
Maaddaama shirkad aan macaash doon ahayn oo xadidan aysan raadinaynin danaheeda macaashka, wax faa iido ah looma sameynin saamileyda, waxaan maalgelin dheeraad ah ku bixinaa kiliinikada iyo aqoon-isweydaarsiga naafada ah.
Ujeedada isbitaalka aan faa iido doonka aheyn wuxuu had iyo jeer kujiraa wanaagga guud - wuxuu lamid yahay wanaaga bukaanka shaqsiyeed. Ereyga "aan-macaashku" wuxuu ku habboon yahay sharciga canshuuraha, maxaa yeelay kaliya howlaha ku taxan cutubka 52 ee xeerka canshuurta ee u adeega guud waxaa loo arkaa inay yihiin kuwa aan macaash doon ahayn xagga sharciga canshuurta - tusaale ahaan, waxay quseysaa maalgelinta qeybta caafimaadka GmbH-g-non (gGmbH) waa laga dhaafay canshuurta shirkadaha. . Ugudambeyn, GGmbH waxaa waajib ku ah inay u isticmaasho lacagaha loogu talagalay kaliya ujeedooyin aan macaash doon ahayn.
Marka waxaan rabnaa inaan noqonno rug caafimaad takhasus gaar ah oo aan macaash doon ahayn - oo aan u dhaqano sidii ku habboon. Tani waxay noo oggolaaneysaa furfurnaan, taas oo iyaduna faa'iido u leh bukaanka. Sababtoo ah markaa markaa uma shaqeyno oo keliya qaab karti sare leh anagoo u hoggaansanahay heerarkii ugu dambeeyay, laakiin sidoo kale iyada oo loo eegayo mabaadii'da aadanaha, tayada iyo mabaadi'da dhaqaale - tan macnaheedu waa waxaan dooneynaa inaan u isticmaalno dhammaan maaliyaddeena iyo tan aadanaha anfaca bukaankeenna.
Gundhig: Mu'asasada PixelHELPER waxaa aasaasay dhowr Freemasons iyo farshaxanka iftiinka Oliver Bienkowski. Magaalada Hamburg waxaa ku yaal Isbitaalka Masonic ee ku yaal Rissen, oo ay maamusho Laanqayrta Cas, iyo sidoo kale Hoyga Masonic Retirement Home oo ku yaal bartamaha Hamburg. Isbitaalka Freemason ee Hamburg wuxuu albaabadiisa ka furay Oktoobar 3, 1795 markii Dammtorwall uu ahaa machadkii ugu horreeyay ee gelitaanka dadka jiran, kaasoo markii horeba ka maqnaa Hamburg. Markii hore waxaa loo aasaasay sidii cosbitaal loogu talagalay dumarka dumarka ah waxaana sanado kadib loo sii ballaariyey ragga ragga ah.Markii PixelHELPER Foundation la kala diray, hantidii waxay tagtay Freimaurer Hilfswerk eV, oo qayb ka ahayd urur samafalka
Xaalada taagan 16.04.2020/12/00 XNUMX:XNUMX
Waxaan hadda ka raadineynaa guri kiro ah magaalada Oberwesel. Waxaan u adeegsan doonaa goobta si aan isugu dubarido 3 codsi oo loogu talagalay dayactirka isbitaalka iyo soo saarista rootida qasacadaysan ee xeryaha qaxootiga iyo dadka hoylaawayaasha ah. Isla marka goobta la helo, liisaska saxiixa dhammaan 3da magaalo ayaa lagala soo bixi karaa boggan. Ka dib markaad ururiso saxiixyada, waad noo soo gudbin kartaa liistada dalabka ee goobta. Aftida waxay bilaabaneysaa kahor May 01, 2020
Xaalada taagan 14.04.2020/12/00 XNUMX:XNUMX
Waxaan aragnaa guuldarada ah inaan xuso dalabkeena iibsiga ee Marienhaus Holding khiyaano cad oo saamileyda kale. PixelHELPER Foundation oo aan macaash doon ahayn GmbH waxay la xiriirtay garyaqaanka sharciga maamulka ee Koblenz & ururka Mehr Demokratie eV si loo baaro afti loo qaadayo si loo bilaabo "Shir aan caadi aheyn oo Saamilayda ah oo looga hadlayo Go'aanka Abril 09.04.2020th, 1". Soo gudbinta aftida waa diyaar, laakiin waa in si sharci ah loo hubiyaa. Aftida waxay ku qasbeysaa maamulka magaalada inay go'aan ka gaaraan kulanka saamileyda aan caadiga ahayn. Garyaqaanka sharciga shirkadu wuxuu baarayaa talaabooyinka sharciga ah ee tartanka. Shirka saamileyda aan caadiga ahayn, saamiyada waxaa loo qoondeyn karaa PixelHELPER Foundation gGmbH, iyo howlaha guriga XNUMX ee Oberwesel oo sii socda, iyo sidoo kale ilaalinta xarunta waayeelka.
In kasta oo aan u soo dirnay dalabkayaga wareejinta afhayeenka shirkadda Marienhaus Holding laba jeer email ahaan, ma jirin wax jawaab ah oo laga helay dalabkeenna aan ka ahayn marka laga soo waco taleefanka Heribert Frieling.
Isbitaalka Loreley & Xarunta Dadka Waaweyn waa xarun guud oo ahmiyad weyn u leh Oberwesel. Kulankii ugu dambeeyay ee saamileyda bishii Abriil 09.04.2020th, XNUMX, Marienhaus GmbH kama aysan jawaabin tan, in kasta oo ay jireen dalab lala wareegayo oo ka yimid PixelHELPER Foundation oo aan faa'iido doon ahayn GmbH, dhammaan su'aalahana ku saabsan tan, ma jirin dalabyo la wareegid kale oo la heli karo. Waxaan aragnaa dambiga ciqaabeed ee been abuurka. Marienhaus waxay alaabada u wareejineysaa isbitaalo kale aakhirkiina waxay dooneysaa inay ilaaliso xarunta weyn sidii lo 'lacag ah Iskii u shaqeysta oo sidan oo kale ka sameeya Jarmalka waxaa loo tixgeliyaa dembiyada musalafnimada. Qof kasta oo dhaqaajiya badeecad, yacni hantida isbitaalka, ka hor inta aan la musalifin wuxuu mas'uul ka yahay in la maxkamadeeyo. Isbitaalka waxaa u cunay Marienhaus GmbH dhanka jihada xarumaha kale sida Bingen. Waxaan ka codsaneynaa dhamaan saamileyda inay weydiiyaan Marienhaus GmbH banaanka shirkadda isbitaalka St. Goar Oberwesel GmbH. Maaddaama ay tahay shirkad aan faa'iido doon ahayn, PixelHELPER Foundation ma sameyn doonto wax qaybinta faa'iidooyinka laakiin waxay u horseedi doontaa xarunta weyn & isbitaalka mustaqbalka sababo aan faa'iido doon ahayn.
Risiidhada ku-deeqidda ayaa isla markiiba loo diri doonaa. Rasiidhada wareejintaadu waxay ku filan tahay risiit tabaruc xafiiska cashuurta ah ilaa € 250.
Iyada oo la saadaalinaayo iftiinka taas Wasaaradda Caafimaadka ee Federaalkat PixelHELPER Foundation waxay isu beddelaysaa xiritaanka St. Goar / Oberwesel. Talo soo jeedinteena: Ururka samafalka ee GmbH PixelHELPER wuxuu la wareegayaa saamiga 55% hadii wasaarada caafimaadka Rhineland Palatinate laga bilaabo sanduuqa qaab-dhismeedka Isbitaalka, oo horeyba loogu qoondeeyay bixinta mushaaraadka, mushaharooyinka shaqaalaha, sii wadida howlaha iyo ballaarinta isbitaalka, taasoo fursad u siineysa PixelHELPER fursad ay ku cusboonaysiiso xarunta oo ay ku sii hayaan dhammaan shaqaalaha isbitaalka Oberwesel in ka badan 1 sano. Guriga ku yaal magaalada St. Goar waxaa loo isticmaali doonaa in lagu dhiso mashiinnada hawo-mareenka adduunka saddexaad. Jaamacadda Marburg ayaa dhowaan soo bandhigi doonta aaladda hawo-mareenka fudud ee Afrika dadweynaha. Iyada oo ay ku jirto alaabo alwaax ah iyo qaybo sahlan oo ka socda bakhaarka qalabka, hawo-mareenka ayaa sidoo kale loo dhisi karaa wadamada aan hadda haysan nidaam isbitaal shaqeynaya. Intaa waxaa sii dheer, Mu'asasada PixelHELPER oo leh xafiis ficil oo ku yaal St Hospital Goar waxay dejisey deeqo kale oo aan faa'iido doon ahayn sida rootida rootida qasacadaysan si xasiloonida cuntada loo helo, abaabul xaflad farshaxan fudud & qaado talaabooyin dheeri ah si loo taageero muwaadiniinta St. Goar & Oberwesel. Faafida kale ee soo socota ayaa imaanaysa, ka hor dagaalkii qaboobaa waxa jiray in ka badan 40 cisbitaal oo kaalmo ah oo kuyaala Jarmalka, kuwaas oo loo xidhay kaydinta awgeed. Waqtiyada aafada, ma xiri karno isbitaallo badan. Jawaabta Jens Spahn waxaa raacay emayl, iyada oo loo tixraacayo Wasaaradda Caafimaadka ee Rhineland-Palatinate. Siyaasiyiintu waa inay si dhaqso ah wax u qabtaan. 22aad Malaayiin kaalmooyin ah waa in loo siidaayaa sii wadida howlgalka iyo mushaarka isbitaalka iyo shirkad cusub oo aan macaash doon ahayn waa in la isku dayaa in ugu yaraan isbitaalka la geeyo eber madow sannadaha soo socda, maxaa yeelay marka la barbardhigo Marienhaus GmbH, macaashka GmbH ma aha inuu sameeyo macaash. Taasi waxay noqon laheyd waddo aad u wanaagsan in ugu yaraan dib loo furo cusbitaalka magaalada Oberwesel si loogu sameeyo qalliinka caadiga ah ee isbitaalka. Waxaan ka codsaneynaa Wasaaradda Caafimaadka RLP inay siideyso lacagaha ka yimid dhismaha qaab dhismeedka, si saamiyada loogu wareejiyo PixelHELPER Foundation loona wareejiyo Marienhaus GmbH iyo in shaqaalaha laga badbaadiyo Isbitaalka Oberwesel. Si aan ugu shaqeyn karno isbitaalka iyo howlgabka aqal gabka dhinac dhinac mustaqbalka daryeel aasaasi ah oo wanaagsan. Dowladda Rhineland-Palatinate waxaa sidoo kale waajib ku ah inay ka shaqeyso isbitaal ku yaal magaalada Oberwesel iyadoo loo eegayo dalxiisayaasha booqanaya Middle Rhine, waxaan rajeyneynaa in siyaasiyiintu ay dhiibi doonaan. Soo-iibsiga ayaa email ugu soo diray af-hayeenka shirkadda Frieling ee Marienhaus GmbH wali jawaab lagama helin. Laakiin waxaan u qaadaneynaa sida laanqeerta cas ee Jarmalka, oo loo soo gacan geliyay saamiga 55%, Marienhaus GmbH sidoo kale waxay diyaar u tahay inay na siiso saamiga 55% ee hal euro.
Codsiga muwaaddiniinta si loo badbaadiyo Rugta Caafimaadka Loreley by wakiil August 13th, 2020Oliver Bienkowski